ukuqeqeshwa komzimba ukufundisa isikhathi esithile
Uyakhathazeka ngokukhethekile ngephandle yemoto futhi ufunda ukulungisa umonakalo olula emzimbeni wemoto.
Ufunda ukusebenza ngamathuluzi ahlukene, ukwandisa izingxenye zemoto nokuqoqa, welding and soldering, ukufakela, ukuhlehlisa kanye nokwazisa. Uzofunda imibala efanele bese uphefaza umzimba ngokucophelela.
Ukulungisa izimoto zengozi ngemva kokuhlolwa, ukufunda ukusebenzisa imishini yokuxilonga, ... futhi kungokwakho kwemfundo.
Ngaphezu kwalokho, uzofunda nge-chassis, izinjini, ukuphepha emsebenzini nokugesi.
Ukuqeqeshwa umzimba umlungisi siqukethe 7 amamojuli:
umzimba ukwelashwa surface
Dismounting / bodywork obandayo
Yesigcilikisha ezinengilazi umzimba
umzimba wensimbi Ishidi
Futha Ready okwenza umzimba
Ukulungiselela umsebenzi umzimba
Umzimba wokuqeqesha uthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uqala kumbonisi we-module.
Ngesitifiketi se i-carrossier Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza ngokukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza njengoba ukupenda umshini wokupenda.
I-carrossiers inguchwepheshe futhi ithande ngayinye STEMumsebenzi okhathazeke kakhulu emakethe yomsebenzi.
Ukuqeqeshwa umzimba akudingeki ube nolwazi olukhethekile lwangaphakathi.
Isisebenzi sikaMzimbeni sifaneleka?
Ungahlala usebenza ngomzimba phuthukisa ngemfundo ephakeme ye-EDUCAM.